Laba Xidig Oo Tababarka Liverpool Barri Ku Soo Laabanaya, Midkood Oo Dhaawac Soo Gaadhay Laga Baadhayo Iyo Faah Faahinta Ay Reds Bixisay. - Gool24.Net
Laba Xidig Oo Tababarka Liverpool Barri Ku Soo Laabanaya, Midkood Oo Dhaawac Soo Gaadhay Laga Baadhayo Iyo Faah Faahinta Ay Reds Bixisay.
Liverpool ayaa sabtidii tababarka kooxdeeda ku soo laabtay iyada oo Jurgen Klopp uu shaqada ku sii bilaabay 16 ciyaartoy oo ay qayb ka mid ahi da’yar yihiin laakiin Reds ayaa shaacisay in laba xidig oo kale ay barri oo Isniin ah xarunta tababarka ku soo laaban doonaan.
Liverpool ayaa warbixin ay soo saartay ku shaacisay in barri oo isniin ah ay tababarka kooxdeeda ku soo laaban doonaan xidiga jamaahiirta Reds ay jacaylka wayn u hayaan ee Divock Origi iyo Xherdan Shaqiri oo isaga dhaawac laga baadhayo.
Divock Origi ayaa kooxdiisa Liverpool wada hadal kula jira waxaana la filayaa in uu saxiixo heshiis waqti dheer ah kadib markii uu kalsooni layaableh ku halay wacdarihii uu dhamaadkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay ka sameeyay Champions League.
Laakiin Liverpool ayaa shaacisay in xidiga reer Switzerland ee Xherdan Shaqiri uu baadhitaan caafimaad mari doono barri oo isniin ah kadib dhaawicii ku soo gaadhay kulamadii UEFA Nations League ee uu ka qayb galay bishii la soo dhaafay.
Xherdan Shaqiri ayuu dhaawac ku soo gaadhay kulankii June 9 ee xulkiisa Switzerland la ciyaaray England waxaana la qiimayn doonaa haddii uu qabo dhaawac uu daawayn u baahan yahay ama uu garoomada ka sii maqnaan karo.
Laakiin Origi ayaa barri marka xaaladiisa caafimaad la hubiyo waxa uu si toos ah u bilaaban doonaa tababarka kooxdiisa Reds isaga oo la midoobi doona Jurgen Klopp iyo ciyaartoy kooxdiisa Reds ee ilaa sabtidii tababarka qaadanayay.
Liverpool waxaa wali ka sii maqnaan doona Virgil Van Dijk, Gini Wijnaldium, Jordan Henderson iyo Arnold oo dhamaantood ka qayb galay kulamadii UEFA Nations League.
Mohamed Salah ayaa haddaba bilaabanaya fasaxa xagaaga kadib markii xulkiisa Masar laga cidhibtiray koobka qaramada Afrika halka Sadio Mane uu wareega siddeed dhamaadka koobka qaramada Afrika ku sii matali doono.
Roberto Firmino iyo Alisson ayaa caawa finalka Copa America u safanaya xulkooda Brazil waxayna kadib bilaaban doonaan fasaxa xagaaga iyaga oo waqti dheeraad ah heli doona.